Real Madrid Oo Man United U Soo Bandhigaysa Gareth Bale Si Ay Pual Pogba U Helaan Iyo Hal Arin Oo Caqabad Wayn Ku Noqon Karta. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Man United U Soo Bandhigaysa Gareth Bale Si Ay Pual Pogba U Helaan Iyo Hal Arin Oo Caqabad Wayn Ku Noqon Karta.
Kooxda Real Madrid ayaan wali iska dhiibin rajadeeda ah in ay xagaagan la wareegto xidiga kooxda Man United iyo xulka qaranka France ee Pual Pogba waxayna hadda Madrid wadaa qorshe ay United ugu qancinayso in ay isku badashaan Gareth Bale.
Manchester United ayaan doonayn in Paul Pogba uu kooxdeeda xagaagan ka baxo laakiin Zinedine Zidane ayaa xidiga reer France ka dhigtay bartilmaameedka kowaad si uu u sii wado dib u dhiska uu Madrid ku samaynayo.
Wargayska Daily Mail ayaa sheegayay in Real Madrid ay diyaar u tahay in ay Man United kala heshiiso sidii ay iskugu badalan lahaayeen Gareth Bale iyo Pual Pogba.
Zinedine Zidane ayaa Gareth Bale u cadeeyay in aanu qayb ka ahayn qorshihiisa xili ciyaareedka cusub ee Real Madrid, waxayna maamulka Madrid isku dayayaan wax walba oo suurtogal ah oo ay Pual Pogba ku heli lahaayeen isla markaana uu Bale kooxda kaga bixi lahaa.
Laakiin waxaa jirta hal dhibaato oo ayna Real Madrid xal u heli karin taas oo ah in Gareth Bale uu go’aan ku gaadhay in aanu bixin isla markaana uu diyaar u yahay in uu xataa kursiga kaydka isfadhiyi doono xili ciyaareedka cusub.
Sidoo kale lama oga haddii ay Manchester United ku qanci karto heshiis isku badalasho toos ah oo uu Pual Pogba ugu biirayo Madrid isla markaana uu Bale u soo wareegayo Old Trafford maadaama oo ayna waqti xaadirkan labada xidig isku qiimo ahayn.
Dhinaca kale wargayska reer Spain ee Marca ayaa shaaciyay in Real Madrid ayaa bartilmaakeedka kowaad ka dhigatay saxiixa Pual Pogba isla markaana ay lacag iyo Gareth Bale isku raacin doonaan Man United balse waxay xuseen in arintu ay ku xidhnaan doonto aqbalaada United.
Inkasta oo uu Gareth Bale waqti ahaa xidiga aduunka ugu qaalisan, waxa uu si wayn u lumiyay saamayntii uu kubbada cagta ku lahaa kadib hoos u dhac wayn oo ku yimid xili ciyaareedkii la soo dhaafay.
Inkasta oo ay Manchester United xiiso wayn u qabtay saxiixa Gareth Bale markii uu Jose Mourinho joogay, waxay hadda haystaan fursada ay Madrid kaga aqbali karaan qorshaha ay xidiga reer Wales ku heli karaan.
Gareth Bale ayaa asxaabtiisa Madrid hore ugu sheegay in aanu Bernabeu ka bixi doonin oo uu ciyaarta Golfka iska ciyaari doono xataa haddii aanu qorshaha Zidane ku jirin laakiin waxaa la fahansan yahay in haddii uu heli karo mushaar la mid ah ama ka badan kan uu Madrid ka qaato in uu bixi karo.
Si kastaba ha ahaatee, Daily Mail ayaa sheegay in maamulka Madrid ay isku dayi doonaan sidii ay Pual Pogba ugu heli lahaayeen adeega Gareth Bale.